Home » Fitsangatsanganana an-dalamby » Misokatra indray ny fiaran-divay avy any Napa Valley amin'ny 17 Mey
Iray amin'ireo lalamby mpandeha manan-tantara vitsivitsy mavitrika any Etazonia, mankalaza ny fisokafany indray ny traikefa ananan'ny firenena divay malaza.
Ny Napa Valley Wine Train dia nanambara fa handray tsara ireo mpandeha hiverina manomboka ny alatsinainy izao
Ny Napa Valley Wine Train dia mikasa ny hamerina amin'ny iray amin'ireo fitsangantsanganana malaza indrindra, ny Legacy Tour
Asaina manao sarontava ny vahiny mandritra ny diany, afa-tsy rehefa misakafo na misotro
The Napa Valley Wine Train, fanandramana manintona sy tsy hay hadinoina izay mamerina ny vanim-potoana mahafinaritra amin'ny dia an-dalamby, dia faly milaza fa handray tsara ireo mpandeha hiverina manomboka ny alatsinainy 17 may. Iray amin'ireo làlambe mpandeha maresaka malaza any Etazonia, ny ankalazao ny fisokafany amin'ny alàlan'ny fanolorana tapakila fiderana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana eo an-toerana mba hisaotra azy ireo amin'ny asa ataon'izy ireo. Ny Napa Valley Wine Train koa dia niara-niasa tamin'ny OLE Health hampiantrano toeram-pitsaboana vaksiny vonjimaika ao amin'ny gara misy azy ireo nanomboka ny aprily aprily mba hanohanana ny ezaka eo an-toerana amin'ny fanaovana vaksiny ny fiarahamonina.
"Miavonavona noho ny teo aloha izahay fa anisan'ny vondrom-piarahamonina Lohasaha Napa taorian'ny nijoroan'izy ireo nanatri-maso ny faharetany nandritra ny areti-mandringana ary te-haneho ny fisaoranay an'ireo maherifo mpiasan'ny fitsaboana anay," hoy i Steven Lampkin, talen'ny faritra Noble House Hotels & Resorts. "Faly izahay fa miverina ny zavatra niainantsika tokana ho an'ny mponina sy ny mpitsidika ary nametraka fepetra fiarovana maro izahay mba hanomezana fiadan-tsaina ny mpandeha sady mankafy ny fisakafoana an-tsokosoko sy fisakafoanana mahafinaritra eto amin'ny Wine Train."
Ny Napa Valley Wine Train dia mikasa ny hamerina amin'ny iray amin'ireo fitsangantsanganana malaza indrindra, ny Legacy Tour. Ny Legacy Tour dia manomboka amin'ny fanandramana divay mamirapiratra, arahin'ny fitsangatsanganana an-dàlambe mandritra ny adiny telo ao amin'ny Lohasaha Napa malaza, sakafo gourmet efa-jaza efatra natolotry ny ekipan'ny mpanazatra manam-pahaizana momba ny vinaingitra ao amin'ny Wine Train, fijanonana eo amin'ny sonia Napa Valley hahazoana sary fanararaotana sy fitsidihana manokana ary fitsangatsanganana ao amin'i Charles Krug sy V. Sattui. Ny fitsangatsanganana an-dalamby feno divay misy ny Gourmet Express, Vista Dome, Grgich Hills Winery Tour ary ny Murder Mystery Tour dia voatendry hanomboka handray ireo vahiny amin'ny tapaky ny volana Jona. Ny fitsangatsanganana tsirairay dia ahafahan'ny mpandeha mankafy ny fahatsiarovana tsy manam-paharoa ireo tanimboaloboka sy famiazam-boaloboka malaza any Napa Valley, serivisy fisakafoana tsara ary sakafo misy hazakazaka marobe mandritra ny fialan-tsasatra amin'ny fiaran-dalamby fahagola izay namboarina tsara.
Ny Napa Valley Wine Train dia namorona tontolo azo antoka sy ara-pahasalamana miaraka amin'ny fepetra fiarovana vaovao napetraka ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa sy ny mpandeha. Nijanona ny seza fiaran-dalamby nentim-paharazana, ary enina metatra ny elanelan'ny latabatra ankehitriny ary misy partitions namboarina manasaraka ny vala tsirairay. Ho fanampin'izany, ny mpandeha sy ny mpiasa rehetra dia tsy maintsy manao sarontava mba hiakaran'ilay fiarandalamby, angatahina ny olona hisaron-tava mandritra ny diany ny vahiny raha tsy rehefa misakafo na misotro.